ဆုံဆည်းရာ: ထားရစ်သူနဲ့ ကျန်ခဲ့သူ
သူ… ရိုးလွန်းလို့ “အ”
အရပ်က စိတ်ပေါက်ပြီး အပြောခံရတဲ့သူ….
သူ….. အမှန်တရားနဲ့ ရိုးသားခြင်းကိုပဲ စားသုံး
သူ့မှာ … ပိုင်ဆိုင်တာဆိုလို့
(၂၂)နှစ် ကျော်ကြာ တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း
ဘယ်တုန်းကမှ အသုံးမတည့်တဲ့ ဆုတံဆိပ်တွေ။
ဟို … အမျိုးအိမ်တလှည့်ရောက်
ကျနော် မယုံနိုင်ခဲ့ဘူး အဖေ ….
ကျနော့်ထံ စွန့်စွန့်စားစား ရောက်လာတဲ့
ရှင်ကွဲ စခွဲခဲ့တဲ့ သားဆိုးအတွက်
အသေထွက် ထွက်ရှာတာလား အဖေ။
လင်ကို အရှင်လို့ သဘောပိုက်
ဘာကို မျှော်လင့်ပြီး အသက်ရှင်နေတာလည်း အမေ ….. ။
Posted by ကိုဈာန် at 9:21 AM